ဥပဒေရေးရာမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက် | အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ - မေတ္တာသည်လိင်နှင့်အင်တာနက်
ပင်မစာမျက်နှာ အရင်းအမြစ်များ ဥပဒေရေးရာခွင
ဤစာမျက်နှာကိုအဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ၏ဥပဒေရေးရာမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ website ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. ယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များအကွံဉာဏျမရှိ, ကဲ့သို့သောကုသမရသင့်ပါတယ်။
ဤ website ပေါ်တွင်ဥပဒေရေးရာသတင်းအချက်အလက်အမြန်သို့မဟုတ်အဓိပ်ပာဆိုကိုယ်စားသို့မဟုတ်အာမခံခြင်းမရှိဘဲ "ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်" ထောက်ပံ့ပေးသည်။ အဆိုပါဆုကြေး Foundation မှဤ website ပေါ်တွင်ဥပဒေရေးရာသတင်းအချက်အလက် ဆက်စပ်. မကိုယ်စားသို့မဟုတ်အာမခံစေသည်။
•ဤ website တွင်တရားဝင်သတင်းအချက်အလက်မှာအားလုံးအဆက်မပြတ်ရရှိနိုင်ပါ, သို့မဟုတ်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် သို့မဟုတ်
•ဤ website တွင်ဥပဒေအချက်အလက်များပြည့်စုံစစ်မှန်တဲ့, တိကျ, ကို up-to-date ဖြစ်အောင်, ဒါမှမဟုတ် Non-အထင်မြင်မှားစေသောဖြစ်ပါတယ်။
၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုခြင်း
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဝဘ်ဆိုက် (မ်ား) ကိုသင်အသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏တစ်ခုတည်းသောအန္တရာယ်ရှိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက် (များ) နှင့်ပါ ၀ င်သော ၀ န်ဆောင်မှုများမှအကြောင်းအရာများသည်ထုတ်ဝေသည့်အချိန်တွင်မှန်ကန်တိကျမှုရှိစေရန်နှင့်မှန်ကန်မှုရှိစေရန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအားလုံးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၀ က်ဘ်ဆိုက် (မ်ား) နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို“ ဖြစ်သကဲ့သို့” နှင့်“ ရရှိနိုင်သည့်အတိုင်း” အခြေခံပေါ်တွင်ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက် (မ်ား) သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ပေးသောအကြောင်းအရာများ၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်တိကျမှု၊ အချိန်မီ၊ ပြည့်စုံမှုသို့မဟုတ်သင့်လျော်မှုတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အာမမခံပါ။ သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက် (များ) ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကင်းရှင်းခြင်းသို့မဟုတ်အမှားကင်းခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များ (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ရရှိနိုင်သောအမှားအယွင်းများ၊ ပျက်ကွက်မှုများသို့မဟုတ်တိကျသောသတင်းအချက်အလက်များအတွက် Reward Foundation မှသို့မဟုတ်ကိုယ်စားကိုယ်စားပြုခြင်းအားတာ ၀ န်မရှိပါ။
၀ န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော (သို့) အခြားနည်းဖြင့်ရယူထားသောမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ သင့်ကွန်ပျူတာစနစ်ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ထိုပစ္စည်းများကို download လုပ်ခြင်းမှရရှိသောအချက်အလက်များဆုံးရှုံးခြင်းအတွက်သင်သာတာဝန်ရှိသည်။
Reward ဖောင်ဒေးရှင်းမှသင်ရရှိသောနှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ မည်သည့်အကြံဥာဏ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင်အတိအလင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိသောမည်သည့်အာမခံချက်ကိုမဆိုဖြစ်စေ၊
ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများ၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက် (များ) နှင့် / သို့မဟုတ်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆို ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်စာချုပ်၊ (ခ) အခကြေးငွေပေးဆောင်ရသော ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်မည်သည့်စာချုပ်အရမဆိုသင်ဆုကြေးငွေဖောင်ဒေးရှင်းသို့သင်အခိုင်အမာပေးဆောင်သောစျေးနှုန်းသည်အငြင်းပွားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အဖြစ်အပျက်မဖြစ်မီ။
ထူးခြားသောအကျိုးဆက်များသို့မဟုတ်စံနမူနာပြပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အကျိုးအမြတ်၊ ဝင်ငွေ၊ စီးပွားရေး၊ မျှော်လင့်ထားသည့်ငွေစု၊ ချစ်ကြည်ရေးသို့မဟုတ်အခွင့်အရေးအတွက်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ဆုံးရှုံးခြင်းအတွက်တာ ၀ န်ယူဖောင်ဒေးရှင်းသည်တာ ၀ န်ယူမည်မဟုတ်ကြောင်းသင်ရှင်းလင်းစွာအသိအမှတ်ပြုသည်။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်မည်သည့်အရာကမဆိုစားသုံးသူများ၏ပြဌာန်းထားသောအခွင့်အရေးများကိုအကျိုးသက်ရောက်မည်မဟုတ်ပါ။ (The Reward Foundation) ၏ပေါ့ဆမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသောလိမ်လည်မှု၊
၀ က်ဘ်ဆိုက် (များ) ပေါ်မှ ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ရရှိနိုင်သောအကြောင်းအရာများသည်ယေဘုယျအချက်အလက်များအတွက်သာဖြစ်ပြီးတရားဝင်သို့မဟုတ်အခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဥာဏ်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်မည်သည့်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆို ၀ ယ်ယူရန်ထောက်ခံချက်တစ်ခု ဟူ၍ မရည်ရွယ်ပါ။ တိကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရပါမည်။ သတင်းအချက်အလက်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက် (များ) နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ပါဝင်မှုသည်သင်၏အထူးသဖြင့်အခြေအနေများကိုမဖော်ပြသောကြောင့်သင့်လျော်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဥာဏ်ကိုအစားထိုးခြင်းဖြစ်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက် (များ) နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ပါဝင်မှုကိုသင်အားမကိုးသင့်ပါ။
၀ က်ဘ်ဆိုက်များ (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ရရှိနိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်၊ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသည်သို့မဟုတ်၎င်းအပေါ်တွင်မည်သည့်မှီခိုအားထားမှုအတွက် Reward Foundation မှတာဝန်မရှိပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုက် (မ်ား) တွင်ဖော်ပြထားသောသတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ရရှိနိုင်သောမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှု၏ရလဒ်အတွက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်မရှိပါ။
သင်သည်သင်၏ရှေ့ရပျ, တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ, ဝတျလုံးတျောရရှေ့နေ, ရှေ့နေချုပ်သို့မဟုတ်အခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုပေးသူဦးထံမှဥပဒေဆိုင်ရာအကြံတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ဤ website တွင်သတင်းအချက်အလက်အပေါ်အားကိုးမပြုရပါ။
သင်သည်မည်သည့်ဥပဒေရေးရာကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်တိကျသောမေးခွန်းများရှိပါကသင်သည်သင်၏ရှေ့ရပျ, တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ, ဝတျလုံးတျောရရှေ့နေ, ရှေ့နေချုပ်သို့မဟုတ်အခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
သင်, ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုရှာကြံနှောင့်နှေးဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြု, ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ website တွင်သတင်းအချက်အလက်မဆိုဥပဒေရေးရာအရေးယူစတငျသို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းကြောင်းဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။
ဒီဥပဒေရေးရာမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်ထဲမှာဘယ်အရာကမှသက်ဆိုင်သောဥပဒေအရခွင့်မပြုကြောင်းမည်သည့်လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ liabilities မဆိုကန့်သတ်ခြင်းသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရဖယ်ထုတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါလုသောငါတို့ liabilities မဆိုဖယ်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။
Reward Foundation သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောထိန်းချုပ်မှုပြင်ပမှအဖြစ်အပျက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကျွန်ုပ်တို့၏စာချုပ်များကိုမလုပ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခြင်းအားပျက်ကွက်ခြင်းအတွက်တာ ၀ န်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ) ။
Force Majeure Event တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောထိန်းချုပ်မှုထက် ကျော်လွန်၍ မည်သည့်လုပ်ရပ်၊ ဖြစ်ရပ်၊ ဖြစ်ပျက်မှု၊ ပျက်ကွက်မှုသို့မဟုတ်မတော်တဆမှုမဆိုပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့် (အကန့်အသတ်မရှိ) ပါဝင်သည်။
သပိတ်, lockouts နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းအရေးယူ။
လူထုအခြေပြုလှုပ်ရှားမှုများ၊ အဓိကရုဏ်းများ၊ ကျူးကျော်မှု၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုခြိမ်းခြောက်မှု၊ စစ်ပွဲ (ကြေငြာသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ) သို့မဟုတ်စစ်ပွဲအတွက်ခြိမ်းခြောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ခြင်း။
မီး၊ ပေါက်ကွဲမှု၊ မုန်တိုင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း၊
ရထားလမ်း၊ ရေကြောင်း၊ လေယာဉ်၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။